Veuve Clicquot Ponsardin Brut 375ml ~ ICT.com.mm
HomeVeuve Clicquot Ponsardin Brut 375ml
Veuve Clicquot Ponsardin Brut 375ml Tasting Notes Golden yellow color with tiny bubbles. Strength and silkiness are perfectly balance with aromatic intensity and lots of freshness. Food Pairing Enjoy itself as an... [Learn more]
Brand: Veuve ClicquotFilter by: FWM, Wine
Golden yellow color with tiny bubbles. Strength and silkiness are perfectly balance with aromatic intensity and lots of freshness.
Enjoy itself as an aperitif. Perfectly can be paired with seafood on white sauces or soft cheeses.
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Veuve Clicquot Ponsardin Brut 375ml ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကိုထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Reims မြို့ Champagne ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Noir စပျစ်၊ ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးအဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ်၊ နက်မှောင်တဲ့အခွံနဲ့ Sparkling ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Meunier စပျစ်တို့ဖြင့် ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု ၁၂% ရှိတဲ့ Brut/ NV (Sparkling – Complex & Traditional) ဖြစ်ပါတယ်။ Non Vintage အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် အသီးသီးနှစ် မတူတဲ့စပျစ်တွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်အရောင်အသွေးနဲ့ ရှန်ပိန်ဖြစ်ပြီး အစာမစားခင် Early Aperitif အနေနဲ့ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ White ဆော့စ်တွေနဲ့ စားသောက်ရတဲ့ ပင်လယ်စာဟင်းလျာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ချိစ်တွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Grapes from as many as 50 to 60 different Crus go to the blending of Yellow Label. He blends 30-45% reserve wines with grapes from as many as 50 to 60 different crus. The Pinot Noir predominance (50-55%) provides the structure that is so typically Veuve Clicquot, while Chardonnay (28-33%) adds the elegance and finesse essential inaperfectly balanced wine, andatouch of Meunier (15-20%) rounds out the blend.The long aging in our Crayères (3 years minimum for Yellow Label) gives silkiness to the Champagne.